. . . . | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » . . . .
Posted by တင့္ on Jul 15, 2014 in Copy/Paste, Moderator | 23 comments
တ င့္ has written 1 post in this Website..
View all posts by တင့္ →
နာ့ ကို သာ သတ် သွား ပါတော့ စန်းးးစန်းး တင့် ရဲ့။
ညှဲ ပလုတု ဟိုနေ့ကတဲက စန်းစန်းတင့်ကိုတွေ့နေတာ။ ဘာလဲဆိုကြည့်နေတာ တကယ့်စန်းစန်းတင့်ကြီးကိုး။ နာမည်အစစ်ကြီးလို့ပြောတာပါ။ အသစ်ဆိုတော့လဲကြိုဆိုပါတယ်။ အသစ်ဆိုတာလဲ နောင်တချိန် လူဟောင်းဖြစ်မှာပဲလေ။ ရွာထဲကထွက်မသွားပဲသာဆက်နေပေးစေချင်ပါတယ်။ နောင်ကိုလဲ ခုလိုပဲဝင်ရောက်အားပေး စေလိုပါတယ်။
စန်းစန်းတင့်ဟာ စန်းစန်းတင့် ပါပဲဗျာ
ဒါမယ့် ဒါက လူကြီးဒေကိစ်စန
ပြေးပြီဗျို့. . .
(အံမာ. . .တယ် ငါတဲ့တော် (အဲ) တယ် တော်တဲ့ငါ။ ပြေးတာတောင် ၁၃ ကျပ်ရအောင် သဂျီးဆီက နှိုက်ယူသွားသေးတယ် အဟိ)
​အော်​တစ်​ဂယ်​ဂျီးကို အသစ်​ဂျပ်​ကျွတ်​ ​အော်​ရယ်​ဂျယ်​နယ်​ ဆိုလဲ ကြိုဆိုရမှာ​ပေါ့ ခုတစ်​​လော ရွာဘက်​​ရောက်​တိုင်​း ပြတ်​သနာ​တွေနဲ့ချည်​့ တိုး​နေလို့ သိပ်​မ​ရောက်​ဖြစ်​ဖူး ။ လက်​စလက်​န ​တော့ ​ဘောကျသဗျာ အဲ့လိုရှင်​းရှင်​းဗွင်​းဗွင်​း ​ပြောတတ်​ ​ရေးတတ်​တဲ့သူ ရွာထဲမှာ မြဲ​စေ့ချင်​ပါတယ်​
နင်က အစစ်မလား ဖြတ်ဖေါက်ဆက်လားဟင်
ကည့်ရတာ အဲ့ဒီစန်းစန်းပေါက်ကြီးကို မော့ဆိုတာကြီးလုပ်ခိုင်းလိုက်မှ ဒီပြသနာတွေအေးမယ်ထင်ပါရဲ့ရှင်။
သူကြီးရဲ့ အနီကြီးနဲ့ ရေးထားတဲ့
ဆိုတာ နဲ့ တိုက်ရိုက် ညိစွန်းနေတယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ် ။
ဒီပို့စ်ဟာ စည်းကမ်းနဲ့ လုံးဝမညီတဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ် တိုက်ခိုက်တဲ့ပို့စ်ဖြစ်လို့ အပြင်းအထန်ကန့်ကွက်ပါတယ်…
ကြည့်ရတာ လူဟောင်း တစ်ယောက်ယောက် က ရုပ်ဖျက်ပြီး ဝင်ရေးနေသလို ခံစားမိတယ်။
ဟိုဘက်က ကိုပေါက် Post မှာ ပြောထားခဲ့ပါပြီ။
ပြောချင်ရင် ကိုယ့် ကိုယ်ပိုင်အသံ နဲ့ ပြောစေချင်တယ်။
ဘာဖြစ်လဲ။ ကိုယ့် ဟာကို မှန်တယ် ထင်လို့ ပြောတာဘဲ။
အဲဒါက ပိုပြီး ထိရောက် ပါတယ်။
Absolutely agree to A Yee.. :s:
ဒီရွာလည်းအခုတလော မငြိမ်မသက်ဖြစ်နေတယ် …..
ဂျလေဘီသည်က ဝါဝင်ဝါထွက်ဘေးကင်းဖို့ ဦးခိုင်ကြီးနတ်တင်သတဲ့
ဦးခိုင်ကြီးနတ်ခမြာ ရွာထဲက ရန်ပွဲတွေကြားဗျာများနေရတယ်
နှစ်ဦးသား ဗျန်းဗျန်းကွဲသွားတဲ့ အခါမှာတော့လေ
နင့်သောက်ခွက် မကြည့်ချင်တော့ဘူး ဖြစ်သွားတတ်ပါသလေ
အော် … ရှက်တတ်ရင် သေ ….။
ကျုပ် ဒီရွာကနေ တရားဝင်ကြေငြာထွက်သွားပီးပါပီ။ ကျုပ်မြန်မာပြည်မှာ မနေတာကြာလို့ပဲလား၊ မြန်မာပြည်မှာ ခေတ်စားနေတဲ့ စကားလုံးတွေ မရင်းနှီးတာကြောင့်ပဲလားတော့မသိ၊ ဒီဆိုက်မှာ ကျုပ်ကို စန်းစန်းတင့် ဖြစ်တယ်လို့ ပထမဆုံး သုံးနှုူန်းခံရဖူးတယ်လို့ထင်တာပဲ။ (ကျုပ်ဖာသာ ဖတ်မိတာ၊မြင်မိတာပေါ့) ဘယ်လိုသဘောပေါက်သွားလဲဆိုတော့ ကျုပ်က ဆတ်ဆတ်ထိမခံနိုင်၊ သည်းသည်းလှုပ်ပြတယ်လို့ မြန်မာလို မြင်တယ်ပေါ့လေ။ ပြောရရင် ကျွန်တော်က မြန်မာစာပေလေ့လာနေတဲ့ သျှမ်းတစ်ယောက်ပါ။ ဘာမှန်းတော့ မသိလိုက်ပေမယ့် ကျုပ်ရင်ဖွင့်ပြဖူးတဲ့ (အတွင်းရေးတွေ ပြောပြဖူးတဲ့သူတွေက ကျူပ်ကို စန်းစန်းတင့်၊ ဒရာမာကင်းဆိုပြီးတော့ ပြောကြလို့) ကျူပ် ဘာစာမှမရေးတော့ဘူး။ မန့်တာတော့ ခုဒါနဲ့ဆို ဒုတိယအကြိမ်မြောက်ပေါ့နော်။
ဒီတော့ တစ်ချိူ့က ကျူပ်လို့များ ထင်မလားပဲ၊ ဒီအကောင့်ကို။ မပြောဘူးထိုင်ကြည့်နေတာ နေရာတစ်ကာ စန်းစန်းတင့်မှ စန်းစန်းတင့်ဖြစ်နေလို့ ဝင်ဖြေရှင်းတာ။ ရွာထဲက မော့တွေ၊ မိုးဒီတွေ၊ ဒဂျီးတွေ IP Address လေးတွေ ထုတ်ပြပြီးတော့ ဘယ်နိုင်ငံက ဖြစ်ကြောင်းပြောပါလေ။
ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်တော်ကတော့ ခုထိ UAE, Sharjah IP Address သုံးနေဆဲပါ။
ဘယ်သူ့ကို ချစ်ချစ်မုန်းမုန်းးး ကိစ္စမရှိဘူးးး
နာ ဂရုစိုက်တာ ဒီရွာ ကြီး နာမည်မပျက် မဆူမပူ ပြီးတာပဲ။
ခက်တာက နာ ကလည်း “ရွာမှာ အပ်ကျတာက အစ အကုန်သိတယ်” လို့လည်း ပြောထားဖူးးး
အကောင့်ပုန်းမှန်သမျှ နေ့မဆိုင်း ဘယ် သူ ဆိုတာ သိခဲ့ဖူးတော့ ခု စန်းစန်းတင့် ဆိုတာ နာ မသိဘူး ဆိုတာ ဘယ်သူမှ မယုံကြဘူးးးး
လူရင်းထဲက ကို မယုံဘူးးး
နာ့ ကို မကြည်တဲ့ သူတွေ ကတော့ ပြီးရော။
နာ လို ထင် သတဲ့။
ရေးပေါက် ပြောပေါက် ဆင်သတဲ့။
တဲ့ တဲ့ တမျိုး သွယ်ဝိုက် တမျိုး လာမေးနေကြတယ်။
တဂျီး နဲ့ မော့ တွေတော့ မရှင်းတော့ဘူးးး အိုင်ပီစစ်ရင် ဘယ်က ဆိုတာ သူတို့ သိနိုင်လို့။
နာ လို ထင်တဲ့သူတွေကို ပြောထားမယ်နော်။
အွန်လိုင်းမှာ ဒီ မျက်နှာ အစစ်နဲ့ နေလာတာ ၁ဝ နှစ်နီးပါးတော့မယ်။
မှန်တယ်ထင်တာ ကိုယ့်ယူဆချက်ကို ဘွင်းဘွင်းပဲပြောတယ်။
ဒီ အခွက်နဲ့ပဲ ပြောင်ပြောတယ်။
လူရင်းလို ထင်ရင် ပို အားမနာတမ်းပြောတယ်။
လူရင်းမို့ အားနာ တဲ့ထဲ နာမပါဘူးးး
ခု ဒီ ရွာမှာ ရွာ ကို ထိခိုက်နိုင်မဲ့ ကိစ္စကလွဲပြီး သူများကို ပါစင်နယ်မှာ ပြောတာနည်းတယ်။
ခု စန်းစန်းတင့် ပြောသလောက် က နည်းနေသေးတယ်။
နာ ပြောရင်တော့ တောင်းပန်တာတွေ ခံပြီး ပြောနေမှာ မဟုတ်ဘူး။
နာ့ အကောင့်ပုန်း ဆို ဒီ ထက် ပိုကြမ်းမယ်မှတ်။
ဒါမဲ့ ပုန်းပြီး ပြောရလောက်အောင် မျက်နှာထောက်ရမဲ့သူမရှိ၊ ကိုယ့်ထမင်းကို စားလာတာမို့ အကုန်ပြောရဲတယ် သာမှတ်။
အဲဒီတော့ စန်းစန်းတင့်ကို နာ လို့ ထင်ရင် တည့်တည့်လာရှင်းးး
ဟိုလူလွှတ် ဒီလူလွှတ်မေး မလုပ်နဲ့။
ရိုးရိုးပြောတာကို စောင်းပြောတာလို့ ထင်တဲ့သူကို တည့်တည့်ကို ပြောပြီ။
စောင်းပြောတယ်ထင်ပြီး စိတ်ထဲက နာနေတဲ့သူတွေ တည့်တည့်ပြောတာ မကြိုက်ရင် လဲသေကြ။။
စန်းစန်းတင့် ရှိခြင်းမရှိခြင်းကို ပြောတာမဟုတ်။
ကျုပ် ကို ထင်နေလို့ လာရှင်းရခြင်းသာ။
အကောင့်ပုန်းတွေက နာ့ နာမည်တွေပဲ ဘာလို့ ယူကြတာတုန်းဟမ်?
ရွာကြီးက ခု နောက်ပိုင်း အယင့်အယင်ကထက် ရန်များ ( အဲလေ )
စည်ကားလာနေပါတယ် ။ သွေးတိုး ဆီးချို ရှိသူများ မဖတ်သင့်ပါ ။
အော်.. စစ်ပွဲတွေကလဲ တဂျိမ်းဂျိမ်းနဲ့ပါလား.. မိုးရာသီမို့လို့ ထင်တယ်.. မိုးပြီးရင်တော့ တော်ကြတော့နော်… ကျွန်တော့်ကြောင့်လို့ ထင်တာပဲ.. တခါဖြစ်တယ်.. အခုထပ်တွေ့တယ်.. စိတ်မကောင်းဘူး.. ကျွန်တော်တောင် အသားကျသွားပါပြီဗျာ.. ပြီးတာတွေ ပြီးပါစေတော့နော်.. ဇာတ်လမ်းတွေ မသိပေမဲ့.. ချစ်ချစ်ခင်ခင်ပဲ နေစေချင်ပါတယ်ဗျာ.. စိုတဲ့လက်တွေ မခြောက်စေချင်ဘူး… အားလုံးကိုယ်စီ သည်းခံလိုက်ကြပါနော်… စစ်အေးလိုက်ကြပါ… ကျွန်တော့်ကို ပြောတဲ့သူတွေကို.. ပြန်မပြောဘူး.. သည်းခံတယ်.. ကိုယ့်ဘက်ကလဲ နည်းနည်းလေး လိုက်လျောပေးလိုက်တယ်.. အိုကေပြီလို့တော့ ထင်တာပဲ.. ဟဲ …
(ကျန်တဲ့အပြင်ကစာဖတ်သူတွေဘယ်လိုနေမယ်မသိပေမယ့် မှန်းကြည့်လို့ရတယ်။ဒီဝက်ဆိုက်ကြီးကအရှုပ်ထုတ်ကြီးပါဟယ်ဆိုပြီး နောက်ယောင်လို့တောင် ခလုပ်နှိပ်ကြည့်မိမှာမဟုတ်တော့ဘူး။)
ကျနော် 2009 ကတည်းက စာဝင်ဖတ်နေတာ လက်ရှိကာလလိုအချိန်တွေ အများကြီးတွေ့ဖူးပါတယ်
နေမကောင်းဖြစ်တာတွေ(site နဲ့ကင်းကွာ) ပြန်ကောင်းလာတာတွေ(re entry)
မျိုးစုံ မျိုးစုံ ရှိတယ်
ကလေးဝေဒနာခံစားနေရချိန်မှာ ဆေးရုံက ဆရာဝန်၊သူနာပြုကိုသွားပြောတော့ အရေးမကြီးပါဘူးလို့ ပြောပီး ဘာမှမလုပ်ပေးတာခံရဘူးရင်
(အမှန်တကယ်လည်း ပညာရှင်ဘက်ကကြည့်ရင် အရေးမကြီးဘူး လူနာရှင်ကသာ စိတ်ပူနေတာ)
Sensitive Issue ဆိုတာ နားလည်လာလိမ့်မယ်
ကျနော်တို့ကို ဆရာဦးဖေသက်ခင်က Sensitive Issue တွေကဘယ်လို ဘယ်သင်း..ဘယ်လိုကိုင်တွယ်ရမယ်ဆိုတာ သင်ပေးခဲ့တယ်
စာရေးသူ ၁ ယောက်အတွက် သူ့စာတွေက ကောင်းချင်ကောင်းမယ် ကောင်းချင်မှလည်းကောင်းမယ်
ဒါပေမဲ့သူ့အတွက်တော့ ရင်သွေးတွေပဲ (လှလှ မလှလှ ခြေလက် စုံစုံ မစုံစုံ)
ကျနော်လည်းအဲလိုပဲ အချိန်မရလို့ ဂရုမစိုက်မိတာရှိချင်ရှိမယ် စာ ၁ ပုဒ်စီမှာထားတဲ့ တန်ဖိုးထားမှုကတော့
သူများဆိုတာလဲ Customerဖြစ်ဖြစ် ဝန်ထမ်းကိုဖြစ်ဖြစ် အဲဒါ ငါ့သားလေးသာဆိုရင် ငါ့သမီးလေးသာဆိုရင် ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့လုပ်
နောက် ခင်ဗျား creation တွေလုပ်ပြီးသွာရင်တော့တမျိုးပေါ့နော
စကားမစပ် နိ ကဆြာဝန်ထင်တယ်..
ဖေသက်ခင်ကို ဆြာ ခေါ်လို့လေ…
နာတို့ကတော့ အဲ့ဘဲကို ဖန်ရှောက်ခင်ပဲခေါ်တယ်
) မြီးတုပ် မြီးတုပ်
( အောကားကျိ ။
ဟီးဟီးးဦး​ကြောင်​ဝန်​ခံလိုက်​ပါ။ ဟိုမှာ သူများ​တွေအလုပ်​ရှုပ်​ကုန်​ပြီ။
သူကြီး ကိုသမာသမတ်​ရှိတယ်​လို့ယုကြည်​ လို့ trust မဟုတ်​ဘူး​နော်​ believe မို့လို့ သူကြီး​ကောင်​း​ကောင်​း​ဖြေရှင်​းမယ်​လို့ ​စောင်​့ကြည်​​နေပါတယ်​။ အတုယူမို့လို့။ အစစ်​မယူဘူး…